News | चाेरी
News | Tag: चाेरी
आफ्नै घरबाट दश लाख रूपैयाँ चोरेर १९ वर्षिया युवती ब्वायफ्रेण्डसँग फरार भएपछि
एजेन्सी । घरबाट दश लाख रुपैयाँ चोरेर भागेकी एक १९ वर्षीया युवतीलाई मुम्बई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनले भाग्नुको कारणबारे अनौठो जवाफ दिएकी छन् ।
'गुगल म्याप'काे साहारामा लुटियाे ९ वटा मन्दिर, प्रहरीले पनि लियाे गुगल म्यापकै सहयाेग
कर्नाटक (एजेन्सी) । सूचना प्रविधिको विकासले केही कुरा पनि असम्भव बनाएको छैन । जसको पुनर्पुष्टी भारतको कर्नाटक राज्यमा भएको छ ।
देशभर चाेरीकाे घटना बढ्याे, रातिभन्दा दिउँसाे बढी हुन थाल्याे चाेरी
काठमाडौँ । देशभर चोरीका घटनामा वृद्धि भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आव २०७५/७६ मा चोरीका घटनामा दुई हजार ६ सय ४६ व्यक्ति विरुद्द मुद्दा दायर गरेको हो ।
न्यूराेडमा जब सांसदकै पर्स लुटियाे
काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोड क्षेत्रमा प्रदेश नं. ३ की सांसद भावना सुवेदी लुटको शिकार बनेकी छिन् । व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा न्युरोड पुगेकी सांसद भावना सुवेदीको पर्स लुटिएको हो ।
शृङ्खलाबद्ध चाेरीकाे घटनामा भेटियाे बालककाे संलग्नता
नेपालगञ्ज । एकैरात नेपालगञ्जका नौ पसलमा दुई बालकले चोरी गरे ।
सिसी क्यामरा तोडफाेड गरी काठमाडाैँकाे एक सहकारीबाट चाेरी
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ माछापोखरीस्थित डियोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट रु. १५ लाख ३० हजार बराबरको धनमाल चोरी भएको छ ।
उपत्यकामा बढ्याे माेटरसाइकल चाेरी, वर्कशप सञ्चालकहरू नै सक्रिय
काठमाडौँ । तपाईंले मोटरसाइकलको चाबी लगाउन भुल्नु भएको त छैन ? चाबी लगाए पनि ह्याण्डिल बन्द गर्न पो बिर्सनु भयो कि ? या असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गर्नु भएको त छैन ? त्यसो भए मोटरसाइकल चोरी हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ ।
चाेरी गर्न आएकाहरूले कुटपिट गर्दा वृद्ध दम्पती घाइते
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्तीमा आज बिहान एक समूहले चोरी गर्ने क्रममा कुटपिट गर्दा वृद्ध दम्पती घाइते भएका छन् । उनीहरुको साथबाट चोरी गर्ने समूहले गरगहना लुटेर लगेका छन् ।
सुन र नगद चाेरीकाे अभियाेगमा पक्राउ परेका युवक सार्वजनिक
भक्तपुर । मध्यपुर थिमी नगरपालिका–६ गाँखुस्थित नविनकुमार बुढाथोकीको घरबाट सुन र नगद चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरी सार्वजनकि गरेको छ ।